Madaxwaynaha DDSI Iyo Golaha Capinetka oo kulan Layeeshay waftigii uu hogaaminayay Madaxwaynaha Dawlada Goboleedka Koonfur Bari Soomaliya. - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI Iyo Golaha Capinetka oo kulan Layeeshay waftigii uu hogaaminayay Madaxwaynaha Dawlada Goboleedka Koonfur Bari Soomaliya.
Jigjiga(CN) Jimce.Feb.13.2015,Sidaad warakayagii hore kula socoteen waxaa booqasho aqoon korodhsiya ku yimiday deegaanka wafti uu hogaaminayo madaxwaynaha dawlada goboleedka koonfurbari soomaliya mudane shariif xasan sheikh aadan, waftigaa oo ay xukuumada DDSI si balaadhan ugu soo dhawaysay deegaanka.
Haddaba waxaa intii ayna waftigani bixin kulna balaadhan la yeeshay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo golaha capinetka DDSI, kulankaasi oo ka dhacay hoolka shirarka ee xafiiska madaxwaynaha ayaa waxaa hogaaminayay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar.
Kulankaasi oo ay ujeedadiisu ahayd in waftigan uu hogaaminaya madaxwaynaha dawlada goboleedka koonfur bari soomaliya fahan qoto dheer laga siiyo jihooyinka loo maro hayaanka hirgalinta qorshayaasha horumarineed nabadgalyo iyo maamulka suuban ayaa waxaa ugu horaynii ka hadlay madaxwayanah DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar. Wuxuuna madaxwaynuhu waftigan uga waramay taageerooyinka horumarineed ee ay JDFI markasta siiso walaalahooda soomaliya iyo in ay markasta ka go’antahay taageerada dhinaca kasta leh in la siiyo dawlada soomaaliyeed uu curtinka ah ee ay soo naafeeyeen nabadiidka alqushaash.
Isaga oo madaxwaynuhu uga waramay waftigan tubta ay dawlada itoobiya iyo deegaanka soomaliduba ku hanteen horumarkan nabadgalyadan iyo maamulkan saxarka tiran, iyo waliba dajinta qorshayaasha cilmiyaysan oo xiliyaysan loona hirgaliyo sidii loo dajiyay.
Sidoo kale waxa uu madaxwaynuhu waftigan uga warbixiyay heerka uu maanta deegaanku marayo gaar ahaan afartii sano ee ugu danbaysay guulaha laga soo hooyay dhinacyada beeraha, waxbarashada, caafimaadka, biyaha dakhliga, isgaadhsiinta, jidadka , horumarinta magaalooyinka, iyo kor u qaadida guud ahaanba koboca dhaqaalaha deegaanka.
Wuxuuna madaxwaynuhu wafigan u sheegay in ay si wayn u garab qabanayaan dawllad goboleedkan hada soo bar baaraya, wuxuna madaxwaynuhu carabka ku adkeeyay in ay soomaliya waxa la dagay tahay nabadgalyo darnada ayna siwayn wadanka soomaliya u naafeeyeen kooxaha dhagar qabayaasha alqushaash loona baahan yahay in marka hore la dajiyo jihooyin iyo qorshayaal lagaga suulinayo wadanka kooxaha dhagarqabayaasha ee gumaaday shacabka soomaaliya una diiday in ay helaan horumar iyo xasilooni.
Masuuliyiinta golaha capienta DDSI ayaa iyaguna waftigan u soo bandhigay habraacyada lagu hantay hirgalinta horumarkan maanta ka jira deegaanka iyaga oo wafigan kulankaasi ku siiyay qorshahagayaal tilmaamaya hananshada ka midho dhalinta qorshaasha horumarineed.
Madaxwaynaha dawlad goboleedka koonfur bari soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheikh Aadan oo kulankaasi ka hadlay ayaa si qoto dheer uga warbixiyay daraanka wanaagsan ee ay xukuumada DDSI ku soo dhawaysay waftigan uu hogaaminayo uguna mahad naqay hogaaminta sare ee xukuumada DDSI.
Wuxuuna sheegay madaxwayne shariif in ay intii ay joogeen xarunta deegaanka ee jigjiga wax badan oo u noqonaya gashi horumarineed ka faa’iidaysteen deegaanka isaga oo tilmaamay in ay hogaaminta deegaanka uga baahan yihiin in ay siwayn u garab qabtaan dawlada goboleedka koonfur bari soomaliya.